Ithuluzi Lokulungisa Nokutakula. Finyelela i-Fix Software.
DataNumen Access Repair iyona best Ithuluzi lokulungisa nokuthola kabusha emhlabeni. Ingalungisa imininingwane etholakele ye-Access .mdb ne .accdb futhi ibuyise idatha yakho eningi ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela inciphise ukulahleka kokonakala kwefayela.
Kungani DataNumen Access Repair?
Izinga lokutakula yi-most umbandela obalulekile womkhiqizo wokutholwa kokufinyelela. Ngokususelwa ekuhlolweni kwethu okuphelele, DataNumen Access Repair inezinga lokululama elihle kakhulu, ingcono kakhulu kunanoma iyiphi enye imbangi emakethe!
Funda kabanzi mayelana nokuthi kanjani DataNumen Access Repair kubhema umncintiswano
Noma kunjalo yize ekuqaleni bengicabanga ukuthi le yimali eningi ongayisebenzisa ohlelweni oluncane,
Noma kunjalo yize ekuqaleni bengicabanga ukuthi le yimali eningi ongayisebenzisa ohlelweni oluncane, DataNumen Access Repair uthole idatha yethu ngakho manje ngijabule kakhulu;)
Wow software yakho guys is awesome I downloaded the trial software and it was able to show me all of the tables that I had in ngqo. Le sofware
Siyabonga ngokubuyela kimi. Kusukela lapho ngithenge isoftware ngathola isixhumanisi sokulanda isoftware khona manjalo. Ngayifaka futhi yasebenza
DataNumen Access Repair ululama idatha eningi kunanoma yimuphi omunye umkhiqizo engiwusebenzisile. Kungisizile ukuthi ngigcine imininingwane eminingi ekhohlakele. Nginguye
Costume Izinsiza Zokusungula
UDavis, CA, eU.SA.
ISanto Domingo, eDominican Republic
Ngomhlaka 30, 2018
Isixazululo Sokulandela Amaphutha Avamile Ngenxa ye- Finyelela Inkohliso Database
Ifomethi Yedathabhegi Engaziwa
I-database 'filename.mdb' idinga ukulungiswa noma akuyona ifayili ledatha.
Injini yedatha ye-Microsoft Jet ayikwazanga ukuthola into ethi 'xxxx'.
Amarekhodi awakwazi ukufundwa; ayikho imvume yokufunda ku-'xxx '.
Izici eziyinhloko ku DataNumen Access Repair v3.8
Ukusekela ukulungisa iMicrosoft Access 95, 97, 2000, 2002 (XP), 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 kanye ne-Access for Office 365 yolwazi.
Ukusekela ukubuyisa ukwakheka namarekhodi amatafula ku-Access database.
Ukusekela ukubuyisa izinkambu ze-MEMO ne-OLE.
Ukusekela phinda uthole amatafula asusiwe futhi amarekhodi kuzizinda zokufinyelela.
Ukusekela ukuthola izinkambu ze-autonumber nezinkomba.
Ukusekela ukubuyisa ubudlelwano.
Ukusekela ukuthola imibuzo.
Ukusekela ukuthola imininingwane yolwazi efakwe ngekhodi ye-password.
Ukusekela ukulungisa i-Access mdb kanye namafayela e-accdb kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukuthola nokukhetha amafayela we-Access mdb ne-accdb azolungiswa kukhompyutha yendawo, ngokuya ngemibandela ethile.
Ukusekela ukulungisa iqoqo lamafayela we-Access mdb ne-accdb.
Sekela ukuhlanganiswa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa ifayela le-mdb ne-accdb ngemenyu yokuqukethwe ye-Windows Explorer kalula.
Ukusebenzisa DataNumen Access Repair Ukubuyisa Imininingwane Yokufinyelela Enenkohlakalo
Lapho imininingwane yakho ye-Microsoft Access (.mdb noma .accdb file) yonakele noma yonakele futhi awukwazi ukuwavula ngokujwayelekile, ungasebenzisa DataNumen Access Repair ukuskena amafayela bese ubuyisa idatha kuwo ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola noma iyiphi ifayela le-Access mdb / accdb elonakele noma elonakele nge DataNumen Access Repair, sicela uvale i-Microsoft Access kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha ifayela le-mdb / accdb.
Khetha ifayela le-Access mdb / accdb elonakele noma elonakele elizolungiswa:
Ungafaka igama lefayela le-mdb / accdb ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela.
Ngephutha, DataNumen Access Repair izogcina imininingo egciniwe yokuFinyelela okuhleliwe kufayela elisha elinegama elithi xxxx_fixed.mdb, lapho i-xxxx igama lefayela lomthombo mdb / accdb. Isibonelo, ngefayela iDamaged.mdb, igama elizenzakalelayo lefayela elihleliwe lizoba Damaged_fixed.mdb. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Access Repair intando start ukuskena nokulungisa ifayili lomthombo mdb / accdb. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokulungisa, uma i-database mdb / accdb yolwazi ingalungiswa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo elifana naleli:
Manje usungavula i-database ye-mdb / accdb engaguquki nge-Microsoft Access noma ezinye izinhlelo zokusebenza.
DataNumen Access Repair 3.3 ikhishwa ngoDisemba 10, 2020
DataNumen Access Repair 3.1 ikhishwe ngo-Okthoba 31, 2020
DataNumen Access Repair 3.0 ikhishwe ngoMeyi 27, 2020
DataNumen Access Repair 2.9 ikhishwa ngoNovemba 18, 2019
DataNumen Access Repair 2.8 ikhishwa ngo-Agasti 5th, 2019
DataNumen Access Repair 2.7 ikhishwe ngo-Ephreli 18, 2019
DataNumen Access Repair 2.6 ikhishwa ngoJanuwari 21, 2019
Ukusekela Ukufinyelela 2019.
DataNumen Access Repair 2.5 ikhishwa ngo-Okthoba 22nd, 2018
Ukusekela Ukufinyelela kweHhovisi 365.
DataNumen Access Repair 2.3 ikhishwe ngoFebhuwari 11, 2018
Ukusekela Ukufinyelela 2016.
DataNumen Access Repair 2.2 ikhishwe ngo-Agasti 10, 2013
Thuthukisa ukuhambisana kohlelo lokusebenza ne-DAO ne-Access.
DataNumen Access Repair 2.1 ikhishwe ngoMeyi 15, 2009
DataNumen Access Repair 2.0 ikhishwa ngoJulayi 16, 2008
Support Access 2007 yolwazi.
DataNumen Access Repair 1.2 ikhishwe ngoNovemba 19, 2006
Thuthukisa injini yokulungisa.
Ukusekela ukuthola nokukhetha amafayela e-MDB azolungiswa kukhompyutha yendawo, ngokuya ngemibandela ethile yokusesha.
DataNumen Access Repair 1.1 ikhishwa ngoDisemba 20, 2005
Ukusekela ukuthola izinkambu ze-autonumber.
DataNumen Access Repair 1.0 ikhishwa ngoJuni 18, 2004
Ukusekela ukulungisa imininingwane yolwazi ye-Microsoft Access 95, 97, 2000, XP kanye no-2003.
Ukusekela ukuthola kabusha ukwakheka namarekhodi amatafula akutholakale kulwazi lwe-Access.
Ukusekela ukubuyisa amatafula asusiwe namarekhodi kuzizinda zokufinyelela.
Ukusekela ukulungisa amafayela we-Access mdb kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa iqoqo lamafayela we-Access mdb.
Sekela ukuhlanganiswa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa ifayela le-mdb ngemenyu yokuqukethwe ye-Windows Explorer kalula.